Daaweynta Proton - Daaweynta Sarcoma ee San Diego - CA Proton
LA SOCO SIDAN UU KU SIINAYNO DARYEELKA QOFKA EE CAAFIMAADKA AH IYO MAGACAABIDDA TELEFOONKA
Ikhtiyaarada Telemedicine Hada waa La Heli karaa
Search Maqalka bukaanka858.283.4771
Xaaladaha lagu daweeyo
Maskaxda & Lafdhabarta
Madaxa & Luqunta
Soo noqnoqday & Sare
Dulmarka Taageerada Bukaanka
Qiimaha & Caymiska
Daaweynta Daaweynta Proton The ee loo yaqaan 'Sarcoma'
La dir Sarcoma la-dagaallanka Laascaanood
Tikniyoolajiyadda baaritaanka qalin-qoryaha qalin-xoojinta ee xoog-ku-beddelka ah ee 'California Proton' waa qaab aad u sax ah oo daaweyn shucaac sarcoma ah Taasi waxay u sahasha dhakhaatiirtayada inay si gaar ah u bartilmaameedsadaan burooyinka loo yaqaan 'sarcoma' burooyinka ka soo baxa unugyada jilicsan ee isku xidha ama lafaha leh shucaaca sarreeya.
Marka la barbardhigo daaweynta daweynta ah ee dawaynta proton-ka ee dawaynta wadata, teknoolojiyada baarista qalin-kayga ayaa si sax ah u siisa daaweynta shucaaca ee sarcoma gudaha 2 milimitir iyo daryeelka ugu weyn. Waxaan ku weerari karnaa lakabada lakabka waxaanan yareyn karnaa waxyeelada unugyada iyo xubnaha jirka ee caafimaadka qaba. Tani waxay muhiim u tahay sarcomas ku taal meel u dhaw xubnaha muhiimka ah ee xasaasiga ah ee shucaaca aan loo baahnayn u horseedi kara kordhinta waxyeelooyinka iyo halista kansarka sare. Yaraynta sunta shucaaca la xiriirta waxay sidoo kale kordhineysaa suuragalnimada in bukaanku ku dhammaystiri karaan daaweyn kala go ’yar ama dib u dhac ah.
Lafaha sarcoma (osteosarcoma)
Sokoksiyo kale oo laga helay lafahaaga, murqahaaga, muruqyada, carjawda, dareemayaasha, dufanka iyo xididdada dhiigga
Bar bartanka kaliya
Ilaali wadnahaaga, sambabbada, laf-dhabarta, xubnaha taranka iyo nidaamka dheef-shiidka
Joogto tayada noloshaada inta lagu jiro daaweynta
Yaree waxyeelada daaweynta, oo ay ku jiraan lallabbo, matag iyo daal
Hoos u dhig khatarta kansarka sare ee shucaaca
Faa'iidooyinka Daaweynta Shucaaca Proton ee Sarcoma
Tiknoolajiyadda baarista qalin-jabinta ayaa si sax ah u xakameysa protons-ka si meesha ugu sarreysa loo yaqaan 'Bragg peak' - oo ah meesha ay kujiraan tamarteeda ugu badan - si toos ah burooyinka. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan daaweyno qaababka burooyinka ee isku murugsan iyo kala duwanaanta qaddarka burada dhexdeeda.
Daaweynta proton-ka ee horumarsan waxay u oggolaaneysaa dhakhaatiirta inay si aad ah u doortaan shucaac heer sare ah unugyada kansarka cudurka kansarka, waxayna yareeyaan qiyaasta unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha muhiimka ah ee ku xeeran. Xaaladaha qaarkood, tan waxaa loo muujiyey inay gaarsiiso heerar ka sarreeya daawaynta shucaaca xitaa marka lagu jiro xaaladaha ugu adag.
Sababtoo ah sarcomasku wuxuu ku yaalaa meel u dhaw unugyada xasaasiga ah iyo kuwa xasaasiga ah, daweynta burooyinkaas leh shucaaca ayaa noqon kara mid adag. Aaladda teknolojiyadda baarista qalin-qalooca ayaa gaarsiisa shucaac leh saxsanaanta weyn iyo xakameynta sidaa darteed soo-gaadhista xubnaha ku dhow iyo unugyada sida wadnahaaga, sambabbada, laf-dhabarta, xubnaha taranka iyo nidaamka dheef-shiidka ayaa si weyn hoos loogu dhigay.
Daaweynta 'Proton therapy' ayaa laga yaabaa inay ku siiso faa iido daaweyn ah farsamooyinka shucaaca ee caadiga ah ee dawaynta 'sarcoma', marka loo eego tilmaamaha 'sarcoma' ee 2009 ee ka socda Shabakadda Qaranka ee Kansarka Buuxa (NCCN).
Si ka duwan tikniyoolajiyadii hore, qorshaha daaweynta ayaa lagu ridi karaa kumbuyuutarka oo lagu dhammeyn karaa daqiiqado gudahood. Daaweyntu sidoo kale waa kuwo aan feejignaan lahayn oo sahlan sidaa darteed bukaanku si dhaqso leh ugu laaban karo hawlahooda maalinlaha ah.
Daaweynta Proton ee Sarcoma
Xaq ma u leedahay adiga iyo ilmahaagaba?
Iyada oo ku xidhan marxaladda “sarcoma”, daweynta isku dhafan ee qalliinka, kemotherabi iyo shucaac ayaa laga yaabaa in loogu baahdo qaar ka mid ah burooyinka loo yaqaan 'sarcoma' burooyinka qaarkood. Xulashada daaweynta ayaa sidoo kale saameyn ku leh nooca sariirta, meesha jirka, da'da, caafimaadka guud iyo doorbidyada shaqsiyadeed.
Kansarka Sarcoma ee Soo noqnoqda
Daaweynta 'Proton therapy' badanaa waa sida ugu wanaagsan ee loo daweeyo burooyinka soo noqnoqda Aagagga horey looga daaweeyay daaweynta shucaaca.
Daweynta meelaha hore ee aan cilada lahayn waxay noqon kartaa wax adag. Unugyada caafimaadka qaba ee ku xeeran burooyinka soo noqnoqda ayaan si buuxda u “ilaawin” qaddarka shucaaca ee hore, iyo qiyaas kasta oo lagu daro waxay sii kordhineysaa halista dhaawaca unugyada caadiga ah. Daaweynta loo yaqaan 'proton beam therapy' waxay awood u siisaa dhakhaatiirta inay sifiican uga fiirsadaan qiyaasta bartilmaameedka oo ay ku xaddidaan meel kale, iyagoo u oggolaanaya dib-ugu-daweynta shucaaca bukaanka la xushay.
Natiijooyinka Daaweynta Sarcoma Proton Therapy & Saamaynta Muddada-dheer
Daaweynta Proton therapy for sarcoma ee California Proton Cancer Therapy Center ee San Diego ayaa laga yaabaa inay bixiso natiijooyin isku mid ah shucaaca caadiga ah ee raajada, iyada oo la yareynayo dhibaatooyinka muddada-dheer iyo kuwa halista u leh nolosha sida shucaaca wadnaha, sambabada, lafdhabarta, taranka xubnaha iyo habka dheef-shiidka. Waxay sidoo kale bixisaa suurtagalnimada fursado yar oo kansarrada labaad ah ee nolosha dambe sababtoo ah hoos u dhaca shucaaca ee unugyada iyo xubnaha caafimaadka qaba.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan daaweynta kansarku waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido-darro. Hubso inaad kala hadasho dhammaan khataraha ka imaan kara, iyo waliba ikhtiyaarada daweynta, takhtarkaaga cilmi-nafsiga.
Daraasadaha Cilmi-baarista ee Taageera Daaweynta Proton ee loogu talagalay Sarcoma
Xaaladda caafimaad ee daaweynta proton beam therapy
Qiimaynta halista kansarka ee ay keento shucaaca labaad ee daaweynta proton iyo IMRT ee xubnaha kujira qaybta shucaaca koowaad
Dib-u-eegis nidaamsan ee daaweynta proton ee daaweynta chondrosarcoma ee saldhiga qalfoof
Waxtarka iyo badbaadada baarida shucaaca ee tijaabada shucaaca proton ee loo yaqaan 'chordomas' iyo chondrosarcomas salka qalfoof: warbixintii ugu horeysay muddada dheer
Shucaaca ku-saleysan ee loo yaqaan 'Proton' radiotherapy-ga ku saleysan ee loo yaqaan 'osteosarcoma' oo aan la arki karin ama aan dhameystirnayn
Daawada shucaaca ee loo yaqaan 'proton radiotherapy' ee loogu talagalay rhabdomyosarcoma: natiijada caafimaad iyo isbarbardhiga qiyaasta qiyaasta ee loo yaqaan 'photons'
Daaweynta shucaaca ee loo yaqaan 'Proton radiation therapy' ee loo yaqaan 'chordomas' iyo chondrosarcomas ee saldhiga qalfoof
Dib-u-daweynta aalado laambadeysan oo la tijaabiyey oo ah burooyinka soo noqnoqda ee madaxa iyo luqunta: sunta ba'an iyo suuragalnimada
Daaweynta Ston-scan-ku saleysan ee loo yaqaan 'proton-scanning-based therapy' ee loogu talagalay 'chordoma extracranial chordoma'
Ku saabsan Proton Therapy
Waxyaabaha la Weydiiyo Proton Therapy The FAQs
Soo dejinta Tilmaanta
M – F 8 am-5 pm PT
2021 XNUMX Xarunta Protons Kansarka Kansarka ee California Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Shuruudaha &
Internet Video radio Event TV Warbaahinta bulshada Maqaalka Wararka Bukaankii Hore ama Hada Jira Qoyska ama saaxiibka Gudbinta Dhakhtarka Gudbinta Isbitaalka Gudbinta Caymiska kale Sidee ayaad maqli ina daneeyaa?*
Haddii kale, fadlan sheeg
Cinwaanka Street Cinwaanka Line 2 dareenka State AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingCiidamada Qalabka SidaCiidamada Qalabka Sida ee YurubCiidamada Qalabka Sida ZIP Code
HematologyCaafimaadka DaaweyntaOncology CaruurtaShucaaca OncologyDhakhtar QalliinkaKalkaalisada OncologyPhysicsQiyaastakale
Sideed ku maqashay hawshan?
Xaashiyaha / Kaadhka Warqadda
Waraaq shaqsiyeed / casuumaad
Agaasime / Kormeere